Erna Solberg: Hadafkeenu waa inaan dalka furno, xagaaga kahor. - NorSom News
Erna Solberg: Hadafkeenu waa inaan dalka furno, xagaaga kahor.
Reysulwasaaraha dalkan Norway oo shaley wareysi siisay wargeyska VG, ayaa sheegtay in dowladu ay dajisay qorshe dhameystiran oo looga baaraan-dagayo sidii Norway dib loogu furi lahaa si tartiib-tartiib ah, kahor inta aan lagaarin fasaxa xagaaga.
Reysulwasaaraha Norway ayaa sheegtay in hadafka dowladu uu yahay in dib loo furo dhamaan shirkadaha iyo nolol maalmeedka kale ee caadiga ah, kahor inta aan la gaarin xagaaga(sommerka). Ayna dowladu maalinta khamiista ah ee beri ah ay soo bandhigi doonto qorshaha dib u furitaanka dalka, kadib 2 bilood oo uu dalka xaalad xanibaad ah ku jiray.
Wasiirka qoyska oo wareysiga kala qeybqaatay Erna Solberg, ayaa dhankiisa sheegay in qorshaha dib u furitaanka dalka, ay dowladu ay muhiimadu koowaad siin doonto dhalinyarada iyo caruurta, kadibna shirkadaha ganacsiga, kadibna howlaha kale ee caadiga ah ee nolol maalmeedka bulshada ay ku tiirsantahay.
Xigasho/kilde: Erna Solberg: – Målet er å åpne Norge før sommeren
Previous articleSidee looga hortagi karaa in Ilmahaadu uu dambiile noqdo?: Talooyin ku socdo waalidka soomaaliyeed ee Norway.
Next articleFHI: 90% Dadka uu ku dhacay covid-19, wey ka bogsadeen.